imanoela fifaliana · Mey 2014 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Mey, 2014
Nanomboka nandika tamin'ny 25 Jona 2011 · 1130 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Mey, 2014
Inona No Tadiavinao? Fiantsoana Hitokona Eo Amin'ny Sukiya, Tambajotra Japoney Mpamatsy Sakafo Vita Haingana
Azia Atsinanana 31 Mey 2014
Tena nitokona marina ve ireo mpiasa ao amin'ny Sukiya, ilay tambajotra mpamatsy sakafo vita haingana, malaza amin'ny hena omby sy vary "gyūdon" amin'ny vidiny $3 ?
Mahatsiaro Ny Loza Nitranga Tamin'ny Lalao Baolina Kitra Tao Limà, 50 Taona Lasa Izay
Amerika Latina 31 Mey 2014
Tamin'ny 24 May 1964, olona 300 no maty tao amin'ny Kianja Nasionaly tao Limà, maro ireo olona nitsoaka ny baomba mandatsa-dranomaso ary voahitsakitsaka satria nihidy ireo varavaran'ny kianja.
Fanamby : Nanala Ny Voaliny Ny Vehivavy Iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Mey 2014
Nanao fanamby nanala ny voaliny daholo ireo vehivavy Iraniana mpikatroka mafàna fo mba hanoherana ny fanavakavahana ataon'ny fanjakana amin'ny vehivavy. Jereo hoe ahoana ny nandikàn'izy ireo ny lalàna sy ny niatrehany ary nandefasany ny sariny tao amin'ny aterineto.
Amerika Latina 30 Mey 2014
Azia Atsinanana 30 Mey 2014
Volavolan-dalàna manome alalana ny filohan'ny governemanta ao Makaô, izay faritra manana rafi-pitantanana manokana ao Shina, ho tsy azo enjehana araky ny lalàna sady manome hery azy sy ahazoany tombontsoa isam-bolana ihany na dia miala amin'ny toerany aza izy.
Karaiba 28 Mey 2014
GV Face: Ny Vahoaka No Herin'ny Vonjitaitra Noho Ny Tondradrano Ao Serbia
Serbia 25 Mey 2014
Niresaka tamin' ireo namantsika any Serbia isika tamin'ity herinandro ity mikasika ny ezaka fifanampiana. Inona ary ny dingana manaraka ho an'ny mponina sy ny governemanta? Ary nahoana no mitebiteby ny amin'ny fandrahonana mahazo azy ny haino aman-jery sosialy?
Azia Atsinanana 21 Mey 2014
Manenjika Ny Rafitra Kafala Ireo Vahoaka Libane Sy Ireo Mpifindra Monina Sady Mpanao Hetsika Mafana Fo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Mey 2014
Misy fanentanana karakaraina ao Libanona hamporisihana ny olona hanambara ny tsy fankasitrahany ny rafitra Kafala (fiahiana) sy ny fanararaotana diso tafahoatra ireo mpiasa an-trano. Toy ireo ny fanehoan'ny olona sasantsasany ny fanohanany.